China NRC rubbering coating Manufacturers sy Suppliers | Hongyuan
Ny vokatra dia farany godorao tantera-drano vita amin'ny fingotra coating farany godorao sy ny additives manokana amin'ny alalan'ny dingana manokana. Mety azo ampiharina amin'ny hafa mba hanangana fonontselan'ny tantera-drano tantera-drano mitambatra sosona. Rehefa nampiasaina ho toy ny tsy miankina sosona tantera-drano, ny surface dia ho voaaron'ny insulation sosona. Product modely sy ny famaritana (miovaova amin'ny fanorenana fomba): fanafody karazana, karazana sary hosodoko, sy ny famehezana grouting karazana
● Self-fanonerana: ny ara-nofo dia tsy hisaraka mandritra ny fanorenana, izay mety hanangana milamina sy miray volo sosona tantera-drano. Tantera-drano sosona simba amin'ny fanorenana sy ny asa-tena ho namboatra koa mba hanakanana ny rano tsy ho tantera-drano infiltrating sosona, ary ny hitana ny fitohizan'ny tantera-drano sosona. ● hidiran'i: tantera-drano fitaovana azo arahina amin'ny base Mazava ho azy fa na dia amin'ny rano mba hahazoana antoka tsara ny vokany, rehefa tantera-drano ara-drafitra deformation mitranga. ● Leaching fanoherana: ny zavatra tsy tantera-drano Leach noho ny antony ny rano ambanin'ny tany Flushing aorian'ny fanorenana.
● Simika fanoherana: tsara asidra, alkali, ary ny sira mahatohitra fampisehoana;
● Easy fanorenana: ambany takiana amin'ny fototra Mazava ho azy sy afaka amin'ny fitsaboana manokana ny fanorenana hanafohezany ilay fe-potoana, ary ny fanorenana amin'ny hafanana ambany dia namela;
● Easy fikarakarana sy ny fitantanana
● High mafy votoaty, ary tsy mikorontana raharaha;
● Aza hihamafy, tsy misy poizina, odorless, sy ny loto-maimaim-poana;
● Ny vokatra mety ho voaro ao amin'ny boaty ho voaisy tombo-kase ny fotoana ela, tsy miantraika ny zava-bitany.
Application Sehatra NRC tsy hihamafy fingotra coating godorao azo ampiharina ho tantera-drano fitsaboana ho an'ny trano vaovao naorina, na hanamboarana simba sosona tantera-drano. Tsy azo ampiharina ny tsy tantera-drano ny toerana mahazatra, ary koa ny tonon-taolana sy ny hafa deformation toerana manokana. Raha ampitahaina amin'ny hafa ny fitaovana tantera-drano, dia manana tombony manokana amin'ny fitsaboana tantera-drano ho an'ny toerana manokana.
● Ny vokatra dia azo ampiasaina mba hanangana sosona tantera-drano, na ny hanaraka tantera-drano tantera-drano fonontselan'ny toy ny lakaoly, mba hanangana mitambatra sosona tantera-drano. ● Manana adhesive vokany tsara amin'ny tantera-drano isan-karazany fonontselan'ny (anisan'izany ny EPDM fingotra manify, polyethylene polypropylene manify tantera-drano fibre), izay mety mitambatra tantera-drano hanangana sosona. ● manaraka amin'ny fototra Mazava ho azy mba hanangana hoditra-tahaka mba tsy tantera-drano sosona fandefasana rano;
● Low fepetra takiana amin'ny base hamandoana Mazava ho azy, sy ny fanorenana dia azo ampiharina rehefa ela rano base dia nanadio Mazava ho azy, mba hanafohezany ilay fe-potoana fanorenana;
● dingana maro samihafa sy mety fanorenana: ny vokatra mety ho voaloko na sprayed amin'ny fanorenana.
● Miavaka hafanana ambany constructability: Mitifitra fanorenana dia azo ampiharina eo ambanin'ny toe-piainana ambany hafanana.
● High hifanaraka amin'ny zava-ho-drafitra deformation: ny ara-nofo sy ny manana extensibility miavaka tanteraka hidiran'i ny mampifanaraka ny drafitra deformation, ary mba tsy tantera-drano sosona fahasimbana ateraky ny rafitra deformation. Rehefa mamorona ankapobeny sosona amin'ny fonontselan'ny tantera-drano, NRC tsy hihamafy fingotra godorao coating afaka mandray deformation rehetra miady saina ny toky maharitra intactness ny mitambatra sosona tantera-drano.
Composite Fanorenana amin'ny hoditra manify (tenan'ny)
Fanafanana ny NRC Non-hihamafy fingotra godorao Coating
Fanafody ny NRC Non-hihamafy fingotra godorao Coating
Mpanatanteraka Malagasy: Non-hihamafy fingotra godorao (NRC) Coating (Q / 0783WHY003-2012)
Mafy orina Content% ≥
100% mampivondrona Failure
Low Temperature manovaova
-20 ° C, no ranoka
-25 ° C, no ranoka
Mafana Resistance / ° C
No sliding, tondra na nandatsaka
Antitra Mihitsy mafana 70 ° C × 168h
-15 ° C, no ranoka
tsy misy fiovana
Faharavana mikisaka eo ambany State / N / MG
Anti-fandefasana Performance / 0.6MPa
Previous: tantera-drano singa fototra roa coating
Manaraka: Avo lasitike hateviny acrylic mpihinana tantera-drano ny coating
Polyurethane Coating For Concrete , Acrylic tantera-drano Coating, Tpo manify tantera-drano, Water Base Polyurethane Waterproof Coating , malefaka Polymer-simenitra Coating tantera-drano , Single-Ply Roofing Membrane ,
Tpo manify tantera-drano, Acrylic tantera-drano Coating, malefaka Polymer-simenitra Coating tantera-drano , Water Base Polyurethane Waterproof Coating , Single-Ply Roofing Membrane , Polyurethane Coating For Concrete ,